सिजेरियन डेलिभरीको कति समयपछि अर्को गर्भधारण गर्न उपयुक्त हुन्छ? – Health Post Nepal
सिजेरियन डेलिभरीको कति समयपछि अर्को गर्भधारण गर्न उपयुक्त हुन्छ?
२०७८ चैत २५ गते १२:३८
काठमाडौं–सिजेरियन प्रसूति आजकाल सामान्यजस्तै भइसकेको छ। महिलाहरुमा बढ्दो मोटोपना, मधुमेह, उच्च रक्तचाप र उमेर ढल्किएपछि हुने गर्भधारणलगायतका कारण आजकाल शल्यक्रियामार्फत् बच्चा जन्माउने गरिन्छ। सिजेरियन एक शल्यक्रिया हो, जो शिशुको जन्मका क्रममा आउने जटीलताका कारण गरिन्छ। प्राकृतिक रुपमा बच्चा जन्माउँदा आमा र शिशुको ज्यान जाने खतरा भएको अवस्थामा यस्तो शल्यक्रिया गरिन्छ। सिजेरियन डेलिभरी विभिन्न प्रकारका हुन्छन्, जसअनुसार शल्यक्रियाको १० हप्तासम्म आमाले आफ्नो ख्याल राख्नुपर्छ।
सी–सेक्सन अर्थात् सिजेरियन डेलिभरीपछि कुन–कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र कति समयपछि अर्को गर्भधारण गर्नसकिन्छ भन्नेबारेमा महिलाहरुलाई थाहा हुनुपर्छ। महिलाहरुले दोस्रो सन्तानको योजना कहिले गर्ने र आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल कसरी गर्ने भन्नेबारेमा थाहा पाऔंः
डिस्क्लेमरः कुनै स्वास्थ्य समस्या भएमा सम्बन्धित चिकित्सकको सहयोग, परामर्श लिनुहोला।